Palpasa Cafe: Episode - 7
Aakar Anil April 04, 2009
Listen to 7th episode of Palpasa Café.
पब्लिकेशन नेपालयले प्रकाशन मा ल्याएको नारायण वाग्ले को यो उपन्यास पल्पसा क्याफे रेडियोवाचनमा आज अच्युत घिमिरेको स्वरमा सातौँ अंकको वाचन लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ ।
पल्पसा मरिसकेकी छ, माओवादीले थापेको धरापमा उ चढेको बस परेको थियो तर सँगै रहेको दृश्य बाँचेको थियो । आफ्नी प्रेमिका गुमाएको दृश्य, पल्पसाको हजुरआमालाई भेट्न जान्छ तर अचम्म हजुरआमालाई नातिनी पल्पसा मारिएको थाहा छैन । मारिनेहरु को नाम अहिले सम्म खुलेको छैन, र पछि सम्म पनि खुल्ने छैन, उनीहरु सँधै वेपत्ता नै ठहरिनेछन् । यो युद्ध को ऋतु हो, यसैगरि मन बुझाउनु परेको छ । अहिले जन्मेका भए, बुद्ध ले पनि बन्दुक बोक्थे रे !
पल्पसा मारिइसकेकी छ, तर उसले लेखेको पत्र दृश्य पढ्दै छ, दृश्यले हजुरआमालाई पल्पसा मरिसकेको कुरा बताउन सकेको छैन, हजुरआमा किन पल्पसा आइन भनेर बस्नुभएको छ । जतिजति पत्र पढ्दैजान्छ, त्यति त्यति दृश्य मर्माहत हुँदैजान्छ । ग्यालरी पनि बन्द छ, फुलन ले पनि चिठि लेखेर छोडेकीरहेछ, ग्यालरी मा, उसले लेखेकी छ, पल्पसा सँग विवाह गर्नुहोस्, दाइ ।
अब दृश्य पल्पसा सिरिज गर्दैछ, उ पल्पसा को याद मा केही चित्रहरु कोर्दैछ । उसको प्रेम, जो यस संसारबाट बिदा भइसकेको छ, उनैको याद मा पल्पसा सिरिज गर्दैछ, उसलाई एकान्त चाहिन्छ । डचकेटी क्रिष्टिना, रिपोर्टिङ गर्न नेपाल मा छे । दृश्य को ग्यालरी उसलाई निकै मन परेको छ । क्रिष्टिना र दृश्यको संवादहरु सँगै आजको वाचन सकिन्छ ।
पल्पसा क्याफे को सातौँ अंक सम्म आइपुग्दा, कथाले धेरै घुम्ति पार गरिसकेको छ । नारायण वाग्ले को उपन्यास, पल्पसा क्याफे, रेडियोवाचन को यो बसाइमा अच्युत घिमिरे वाचन गरिरहेकाछन्, पल्पसा क्याफे को सातौँ अंक ।
अब हामीसँग अझै केहि अंक बाँकि छ, जुन हामी आगामी हप्ताहरुमा सुनाउने छौँ । सम्भव भएसम्म, पल्पसा क्याफेका लेखक नारायण वाग्लेसँग गरिएको कुराकानी पनि हामी आगामी अंकहरुमा समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ ।
deepesh April 4, 2009 at 6:36 PM
hi aakar aja ta yekdam chadai upload garnu bhaye chha dherai dherai dhanyebad
Eternal April 4, 2009 at 7:30 PM
Its nice to hear Palpasa series...
Thank u aakar
Kishor April 4, 2009 at 9:01 PM
Thanx for Palpasa Series...... :)
जोतारे धाइबा April 5, 2009 at 7:20 AM
निकै पुन्यको प्रयास गर्नुभएको छ आकारजीले नियमित रूपमा पल्पसा क्याफेको शृङ्खला सुनाएर । उपन्यास आफैँमा मजादार हुँदै हो, अच्युत घिमिरेज्यूको चास्नीदार वाचनले सुनमा सुगन्ध थपेको छ। रेडियो HBC को याद पुन:ताजगी गर्न पाइयो । तपाईँलाई अनेक आभार आकारजी ।
सिकारु April 6, 2009 at 11:54 AM
आकार जी धन्यबाद नयाँ अंकको लागि ।
Keshab Ghimire April 6, 2009 at 1:46 PM
पढ्दा जती कुरा बुझिएको थियो त्यो भन्दा बढी सुन्दा बुझियो । धेरै धेरै धन्यवाद आकार जी
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) April 7, 2009 at 4:07 AM
Kishor November 12, 2010 at 4:27 AM
Eternal November 12, 2010 at 4:27 AM